Nike + Run Club yeApple Watch inokunda rusununguko rwe iPhone | IPhone nhau
Nike + Run Club yeApple Watch inokunda rusununguko rwe iPhone
Pablo Aparicio | | IPhone maapplication, Apple Watch
Kana iwe uri mushandisi wekushandisa Nike + Run Club Iwe uchave unofara kuziva kuti a update izvo zvinouya neshanduko dzakawanda dzakakosha. Iyo vhezheni itsva ndeye v5.3.0 uye inouya panguva yakanaka kana tikatarisa kuti Apple Watch Nike + haina nguva refu yapfuura yakasvika pamaoko evashandisi vaive nemoyo murefu uye vakatenga mutambo wemitambo weiyo inozivikanwa yemitambo brand.
Chii chiri pasina mubvunzo chinonyanya kukosha pane ino gadziriso zvimwe Kuvandudzwa kweApple kweApple Watch Ivo vanovandudza mashandiro ewachi kana chishandiso chisina kubatanidzwa neiyo iPhone. Sekureva kwaNike, vakavandudza GPS uye kuwiriranisa nzira kana rovedzo yatanga kubva kuApple Watch (iyo Runtastic inodzidza, zvirinani patinotanga kubva ku iPhone…). Kune rimwe divi, kana isu tikatanga kudzidziswa kubva pakurinda, iyo iPhone application haizotanga.
Chii chitsva muNike + Run Club 5.3.0
General bug inogadzirisa yeApp uye mashandiro ekuita.
Kugadziriswa kwepamuviri uye kugadzirisa kwevashandisi veApple Watch:
Endpoint ruzivo runowanikwa muApple Watch nhangemutange.
Yakagadziridzwa GPS / nzira kuwiriranisa mumijaho yakatanga paApple Watch.
Kupa zvizere zvakazvimirira mashandiro uye chengetedza hupenyu hwebhatiri, madzinza akatanga neApple Watch haachazotangiswa kuNike + Run Club pane iyo iPhone.
Basa idzva JUST IT IT IT. SVONDO !:
Joinha 5km kumhanya munharaunda yepasirese Svondo yega yega.
Gamuchirai mameseji ekurudziro kubva kuna Kevin Hart panguva yemujaho [Chirungu chete].
Mhanyai matatu akateedzana 3km emakwikwi nemusi weSvondo kuti utange rwizi.
Wana mapepa akasarudzika ekuvagovana pamifananidzo yako.
Sezvo mutambo wandinofarira zvakanyanya usiri wekumhanya, Nike + Run Club haisi application yandakaisa pane yangu iPhone kana Apple Watch. Ndinosarudza Strava, application yemitambo ine yakawanda yemagariro chikamu uye akakosha masiteji, kana Runtastic nekuti, kana ndikawedzera sarudzo dzeese maapplication, ndinogona kutaura kuti ndine zvese zvandinoda. Asi, sekutaura kunoita chirevo, "ruremekedzo harubvise ushingi" uye ndinofanira kubvuma kuti kune mashandiro echikumbiro cheNike chandingade kuona mandinowanzoshandisa, senge iko kurovedzwa kwakatangwa kubva kuwachi kwete zvakare kutanga muIphone.
Ko zvakadii nazvino Nike + Run Club kugadzirisa?
Nike Run Kirabhuvakasununguka
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Nike + Run Club yeApple Watch inokunda rusununguko rwe iPhone
Apple Inogona Kutengesa iPhone 7 muIndonesia Ichitevera Chipikirwa che $ 44M R & D Investment
Rondedzero nezve ramangwana Jailberak yeIOS 10.1.1